Wasiirka Kalluumaysiga Puntland iyo waftigiisii oo wali kulamo is daba-joog ah la leh bulshada gobolka Cayn. – Radio Daljir
Buuhoodle, April 4 – Waftigii uu hoggaaminayey wasiirka kalluumaysiga Puntland Eng. Maxamed Faarax Aadan oo muuddooyinkii ugu danbeeyey ku sugnaa magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn, ayaa wali kulamo aan kala joogsi lahayn la yeelanayo bulshada ku dhaqan gobolka Cayn.
Wasiirka iyo waftigiisa oo halkaasi u tagay dhawr arrimood oo ay ugu horreeyaan taabbo-galinta maamulka iyo tayeynta arrimaha bulshada ee gobolkaasi ka jira ayaa la kulmay qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Cayn gaar ahaanna kuwa magaalada Buuhoodle oo hadda ay ku sugan yihiin wasiirka iyo waftigiisu.
Kulamadaan oo dhammaantood ahaa kuwo xasaasi ah ayaa si kulul looga hadlayey dhammaanba arrimaha gobolka, waxaana si gaar ah diiradda loo saaray sidii loo xoojin lahaa maamulka gobolkaasi iyadoo shacabka iyo dawladba la is-kaashanayo, waxaana sidoo kale la isla soo qaaday sidii hormarin rasmi ah gobolkaasi loo samayn-lahaa taas oo la doonayo dadweynuhu in ay gacan weyn ka gaystaan.
Kulankii ugu danbeeyey wasiirka iyo waftigiisu waxay la yeesheen maalintii shalay ahayd ururrada bulshada ee ka hawlgala magaalada Buuhoodle, waxaana si weyn looga hadlay kaalinta ururrada bulshadu ay ka ciyaari karaan hormarinta arrimaha bulsho ee gobolka, waxayna isku afgarteen labada dhinacba in loo guntado gobolka.
Sikastaba ha ahaatee maamlmaha soo socda ayaa la filayaa wasiirka iyo waftigiisu in ay soo gabagabeeyeen socdaalka ay ku joogaan magaalada Buuhoodle.